रुस-स्पेन तथा डेनमार्क-क्रोएसिया आज भिड्दै, कसको भाग्य बलियो ? | Citizen Post News
रुस-स्पेन तथा डेनमार्क-क्रोएसिया आज भिड्दै, कसको भाग्य बलियो ?
२०७५ असार १७ गते ०९:४३
काठमाडौं । रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा आशा गरिएका जर्मन, पोर्चुगल, अर्जेन्टिनालगायतका टिमहरु बाहिरिएपछि अबका खेलहरु रोमाञ्चक नहुने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ । विश्वकपको फाइनलमा मेसी र रोनाल्डोलाई देख्न चाहाने नेपाली 'डाइ हर्ट फ्यान' हरुको सपनामा समेत ठेस पुगेको छ ।
अर्कोतिर अबका खेलहरुमा कसले विश्व कपको मैदान गुमाउने हो ? त्यतिकै खुलदुली हुन थालेको छ । किनकी अहिले रुसमा भइरहेको खेलहरुको नतिजा उल्टो आउन सुरु गरिसकेको छ । फुटबलका महारथि राष्ट्रहरुले एकाएक मैदान गुमाउन थालेपछि यसपालिको नतिजा समेत नसोचेको हुन सक्ने अड्कल काटिएको हो ।
यसैबीच, आइतबार अर्थात आज पनि प्रिक्वार्टर फाइनलका दुई खेलहरु हुँदैछन् । नेपाली समयअनुसार बेलुकी पौने ८ बजे पूर्व विजेता स्पेन र आयोजक रुसबीच भिडन्त हुँदैछ । स्पेन सन् २०१० को विजेता भएका कारण फेरी उसलाई विजेता बन्ने जुनुन छ भने रुस आयोजक राष्ट्र नै भएकाले उसलाई त जित्नै पर्ने बाध्यता छ । घरेलु मैदान, दर्शकको साथ र आयोजक राष्ट्रप्रति रेफ्रिहरुले समेत लचकता देखाउने कारण आजको खेल पनि त्यसै भन्न सकिन्न । यद्यपि, खेल निष्पक्ष भएको खण्ठमा स्पेनले बाजी मार्न सक्ने धेरैको अड्कल छ ।
रुस बलियो कि स्पेन ?
उता रुसले समूह 'ए' बाट उपविजेता बन्दै राउन्ड अफ सिक्सटिनमा ठाउँ बनाउन सफल भएको थियो । रुसले समूह चरणको खेलमा साउदी अरेबियालाई ५–० र इजिप्टलाई ३–१ ले हरायो थियो भने उरुग्वेसंग ३–० को हार ब्यहोर्नु परेको थियो । उता स्पेन समूह 'बी' को विजेता हो । समूह चरणमा स्पेनले पोर्चुगल र मोरोक्कोसंग बराबरी खेलेको थियो भने इरानलाई १–० ले हराएको थियो ।
क्रोएसिया कि डेनमार्क ?
त्यसैगरी, आइतबार नै राति हुने दोस्रो राउन्ड अफ सिक्सटिनको खेलमा क्रोएसिया र डेनमार्क आमने-सामने हुँदैछन् । डेनमार्क समूह 'सी' को उपविजेता हो भने समूह चरणमा डेनमार्कले पेरुलाई १–० ले हराउँदा अष्ट्रेलियासंग १–१ को तथा फ्रान्ससंग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । त्यस्तै, क्रोएसिया समूह 'डी' को विजेता हो ।
समूह चरणमा क्रोएसियाले अर्जेन्टिनालाई ३–० ले, नाइजेरियालाई २–० ले हराएको थियो भने आइसल्याण्डलाई २–१ ले हराएको थियो । यो हिसाबले हेर्ने हो भने क्रोएसिया डेनमार्क भन्दा निकै बलियो देखिन्छ । आज राति हुने खेलमा निष्पक्ष खेल भएको खण्डमा स्पेन र क्रोएसियाको भाग्य चम्किने निश्चित छ । यद्यपि यो खेल हो, कसलाई कतिखेर भाग्यले साथ दिन्छ भन्न सकिन्न ।